Mmiri mmiri adịghị enwe ọdịdị anya mmiri | Network Meteorology
Ruo ugbu a anyị chere na mmiri ozuzo bụ akwa mmiri (na anyị adọtala ha ọtụtụ narị ugboro ma a na-anọchikwa ha n'ụzọ dị otu a na map amụma ihu igwe), mana NASA na-azọrọ na anyị ezighi ezi.
Dabere na onye nyocha si na ụlọ ọrụ na-ahụ maka mbara igwe US, Chris kidd, mmiri ozuzo adịghị ka anya mmiri, kama ọ dị ka hamburger bun, n'ihi na ka ha dara, ha na-adịwanye "arọ."
Chris Kidd na-akọwa nke ahụ mmiri ozuzo Ha na-aga n'ụzọ atọ dị iche iche, ma onweghị nke n'ime ha ha yiri adọka. Na mbido, ha na - eme obere balloon nke na - eme ka irighiri ihe na - eme ka ha ghara idi n’otu.
Nke mbụ nke mgbanwe na-apụta dị ka mmiri ozuzo daa n’elu. Nrụgide nke ụwa na-esi n'okpuru na-agbagọ ọdịdị ya, na-ahapụ ya gburugburu na ala dị ala, dị ka hamburger buns.
Akụkụ nke atọ pụtara obere oge tupu ọdịda ahụ agbaba n'ime obere tụlee. N'oge ahụ ọdịdị ya ka a tụnyere nke a NASA ọkà mmụta sayensị ka nke a parashute.
Dị ka nke a, ọ dị ka nchọpụta enweghị ezigbo mkpa, mana Chris Kidd na-ekwusi ike na enwere ike itinye ya n'ọtụtụ ojiji, ọkachasị ịghọta usoro ihu igwe: "N'ihe banyere idei mmiri, enwere ike iji ozi ahụ nye ndị ọrụ mberede ndụmọdụ ma mee ka ha rụọ ọrụ nke ọma ma ọ dịkwa oke uru na ụgbọelu, iji duzie ụgbọ elu na ọdụ ụgbọ elu n'oge oké ifufe."
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Nkewa » Kedu ụdị mmiri ozuzo yiri?
Igwe ikuku: ikuku ha na emeputa dika ahihia dika i chere?